ကုန်တိုက်အလယ်က ကိုယ်လုံးတီးကြော်ငြာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ကုန်တိုက်အလယ်က ကိုယ်လုံးတီးကြော်ငြာ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပစ္စည်းသစ်တစ်ခုဟာ ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်တိုးပေါက်နိုင်ဖို့မလွယ်လှပါဘူး။
အားပြိုင်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပစ္စည်းတွေကများလွန်းတဲ့အတွက် မိမိပစ္စည်းကို သုံးစွဲသူတွေသိရှိမှတ်မိလွယ်စေဖို့ရန် ကြော်ငြာကောင်းကောင်းလိုတာတော့အမှန်ပါပဲ။
ထိုကုမ္ပဏီက ရေချိုးရာမှာသုံးစွဲတဲ့ဆပ်ပြာရေတံဆိပ်သစ်တစ်ခုကိုကြော်ငြာဖို့အတွက် လူစည်ကားရာကုန်တိုက်တစ်ခုမှာ မိန်းမပျိုလေး ၃ယောက်ကိုရေချိုးပြသရန်ငှားရမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့လေးတွေဟာ ဦးခေါင်းမှာပုဝါတစ်ထည်ကိုသာ ပတ်ထားပြီး တကိုယ်လုံးဘာမှဝတ်ဆင်
မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေကြတဲ့ လူတွေရဲ့အရှေ့မှာ အဆိုပါဆပ်ပြာရေကို ပျော်ရွှင်
ကြည်နူးစွာပွတ်သပ်ပြသကြရပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းကို ဓါတ်ပုံမပြတ်ရိုက်နေ
သူတွေရှိသလို၊ တစ်ချို့ကတော့ဆပ်ပြာရေကို သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ကူညီသုတ်လိမ်းပေးကြပါ
မိန်းမသားတွေရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးကြော်ငြာခဲ့တဲ့အတွက် သဘောမကျသူတွေရှိခဲ့သလို၊ အဆိုပါကုမ္ပဏီကလဲ မသင့်တော်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကတော့ ခဏတာအတောတွင်းမှာပဲ လူသိများထင်ရှားလာ
ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက တရုတ်ပြည်က သတင်းတစ်ခုပါခင်ဗျာ။
အကယ်၍များ ဆပ်ပြာရေမဟုတ်ပဲကွန်ဒုံးဖြစ်ခဲ့ရင် ထိုကုမ္ပဏီက ဘယ်လိုကြော်ငြာ
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ အဟေး အခုချက်ခြင်းကို
ပြေးကြမှာဗျ။ တရုတ်မှာဆိုတော့လည်း ………
မားကက်တင်းမာယာလေးတွေကို မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ အတုယူ
ဂျ ဗို့ ဂေါင်း ဘာ ဒယ် ဘျာ။
အောက်ဆုံးပုံက လူကြီးက ဘာကိုငုံကြည့်နေတာလဲ သိဘူး မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ဘေးကနော် :shock:
ကိုဇာဂိက ဒီထက်ကောင်းအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ဗျ ( အလကားနောက်တာ )
ကိုဌက်ကြီးပြောသလို ကြော်ငြာရင်တော့ ကြောတော့ဘူး :opps:
အောင်မငှီး .. ဘီလို ဟာဂျီးတွေဒုံး …. ။
အူဝဲလေးတွေများ အောက်မေ့နေသလား မှတ်ဒယ် … မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း နဲ့ … ဟွန့် …
ဟို လူဂျီးတွေကလည်း သွားတွေ ဖြီးနေတာပဲ .. ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေ ပါးစပ်ထဲစင်တာတောင် သိလိုက်မယ် မထင်ဘူး … ။ ဟီးဟီး …
ကြေးစား ပြည့်တန်ဆာတွေကို အငှားခေါ်သုံးထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။ ပြည့်တန်ဆာတောင် လူရှေ့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြရဲတဲ့ လူရှားတယ် … ။
ဟယ်..အသင်ငှက်ကြီး big bird။၀ိဇ္ဇာတွေသမာဓိပျက်တယ်။ဘောက်မဲ့ကြောင့် အဓိကနေရာတွေကို
အတုမြင် အတတ်သင်တွေပါကလား… ကိုရီးယားကားတွေ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ဝင်လာပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေး အရှုပ်အရှင်း လူမှုရေးပြဿနာများ မြန်မာပြည်မှာ ပိုမို များပြားလာပြီး ၂၀၁၁ အတွင်းမှာ မုဒိန်းမှုများသည် ပထမနှစ်ထက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုးတက်မှုပေလား… အရင်နှစ်က ခိုးမှုသည် အများဆုံးဖြစ်သည်လို့ စစ်တမ်းကောက်ခံပြီးနောက် ဒီ၂၀၁၁ မှာ မုဒိန်းမှုက စံချိန်ချိုးသွားပြီး သကာလ ဒီလိုပုံစံတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ လုပ်လာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အင်း တကယ့်ကို မတွေးဝံ့စရာပါပဲ… ဘယ်လိုခေတ်ကြီးထဲ ရောက်နေပါလိမ့်…
ဟိုစပေါ့ရိုက် ဒီစပေါ့ရိုက် မလုပ်ဘဲတင်ပါက
ပိုမိုအကျိုးရှိမည် ဖြစ်၏ ….
ဆပ်ပြာ လည်း မကောင်း
ကွန်ဒုံး လည်း မကောင်း
ဗိုင်အာဂရာ လို ဆေးမျိုး ဆိုလျှင် အလွန်ကောင်း
( အဲ့ဒလို ကြေငြာကြမယ် ဆိုရင် လို့ မေးထားလို့ ဖြေမိပါတယ် )
ကိုလုံးတီး နဲ့ ဆပ်ပြာကြော်ငြာ်တာဘားမှမဆိုင် အ၇ည်အသွေးကောင်း၇င်ဒီလောက်ကြော်ငြာစ၇ာမလိုပါဘူး ၇ိုင်းကို၇ိုင်းလွန်းတယ် အ၇ှက်ကိုမ၇ှိဘူး
ပျော်နေလိုက်ကြတာ။ မျက်တောင်တောင်ခတ်ရဲ့လားမသိဘူး။ စိတ်ပျက်စရာ။
အော် ကြော်အောင်ညာတဲ့ ကြေညာတွေပါလား။
အရှက်ဆိုတာ ဂျိုနဲ့ လားကွယ် မေးယူရတော့မယ်။
အခုမှ သေချာတစ်ပုံချင်းစီ ကို ထပ်ချဲ့ ကြည့်မိတော့
ကပေါက်ဖော် တစ်ယောက် သေချာ ကို ခေါင်း ရှေ့ တိုး ကြည့်နေတာ ဘဲ
အဲဒါချိုရင် .. အဲ .. မွှားလို့
အဲဒါဆိုရင် ကင်မရာ ကိုင်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာ
ရွာထဲက လူတွေများ ပါလေမလားမသိ …
ကြည့်လို့ကောင်းသားပဲ ။ သာဓုပါကိုရင်။
အဲဒါရဲ့အဓိပ္ပါယ်က “အရှက်မရှိသူတွေသုံးတဲ့ ဆပ်ပြာရည်” လို့ ယူဆရမှာပေါ့။
ဒါ့ထက် တရုတ်မှာ ဒါမျိုးလူကြားထဲလုပ်လို့ရပြီလား ???
ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ..ဒီက Marketing သမှားတွေလဲ အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ အရောင်းမြင့်တင်နိုင်ကြပါစေကွယ်
အောက်ချည်ပဲ စိုက်မနေနဲ့ 
မော်ဒယ်တွေကို ကြော်ငြာခပေးရမှာကတော့ နင့်နေမှာပဲ။
နိုင်ငံခြာမှာကြော်ငြာတာမို့လို့ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာသာ အဲ့ဒီလိုကြော်ငြာရင် မော်ဒယ်တွေအရိုးတောင်ကျန်ပါ့မလားမသိဘူး။….
မိန်းမတို့ဣနြေ္ဒ ရွှေပေးလို့်မရ ဆိုတဲ့ မိန်းမဈေးဖျက်တယ်ဆိုပြီး သွားရောက်ရိုက်နှက်ကြရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ရပါ့…။
မလေးက လူတွေလား ….
ကြေငြာနှင့် မကိုက်ညီပါ .. .. ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံ လိုက်မရိုက်လိုက်ရလို့….. အဟီး….
အတော်ကောင်းတဲ့ Idea ဗျာ.
ကျနော်..၀က်တွေ ရဲ့ သဘာဝhttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/12/02/article-2069002-0F0530A200000578-290_634x413.jpg ကိုတော့…ဖတ်ဘူးကြားဘူးပါတယ်..ဒီကြော်ငြာကိုတော့…ကျနော်မတွေ့ ဘူးခဲ့ ပါဘူး…ကော်ပီကူးသွားပါတယ်..။။။
” ဒီဝက်ကလေးတွေဟာ သူတို့ ကိုအိမ်မွေးအချစ်တော်တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးနိုင်မည့် သူကိုကျွန်မတို့ ရှာနေ
တယ်…” လို့ အမေရိကန်၊ကိုရီးယား ကပြားအနုပညာရှင်ကဆိုပါတယ်…
သူမရဲ့ ယခုမီယာမီပြပွဲဟာ သူမအတွက်တော့ ပထမဦးဆုံး ၀က်များနဲ့ အတူနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး…ယခင်က
လည်း သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုများကို ဓါတ်ပုံများမှတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ ခဲ့ ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်…
များက မပေးနိုင်ခဲ့ သည့် ခံစားချက်များအားပေးဆပ်နိုင်လိမ့် မည်ဟု သူမကမျှော်လင့် ထားပါတယ်…
” ဓါတ်ပုံများကပေးဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ခံစားမှုသဘောတို့ ၏ထိတွေ့ ခြင်းဆိုင်ရာအနုပညာအာရုံများကို ပြည်သူ
မဆန္ဒရှိပါတယ် …” လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်…
ကိုရီးယားတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးရဲ့ သမီးလည်းအတွေးအခေါ်တွေကတော့ လန်းနေတာပဲ …
အဲဒီလို ၀စ်လစ်စလစ်အနုပညာမျိူးကတော့ အမျိူးသားထုကြီးအကြိုက်ပေါ့ …
ဒေါ် မြလေး ပြောသလို
” ပြောကို မပြောချင်ဘူး ”
အော် ကြော်ငြာ အော်ကြော်ငြာ…။